IGolden Globes 2015: ukubukeka okuhle kakhulu | Bezzia
IGolden Globes 2015: ukubukeka okuhle kakhulu
U-Eva Alonso | | Ingubo
Ngubunye bobusuku obukhetheke kakhulu onyakeni wosaziwayo baseHollywood, futhi bonke bafuna ukwenza lo msebenzi. I- I-2015 Golden Globes gala Usishiyele izithombe okufanele sizikhumbule, ngophepha obomvu ogcwele ubukhazikhazi kepha ubambe kakhulu kunakuqala. Okumhlophe, okubomvu nesiliva kube yimibala yohlelo lwama-72 futhi lokhu, ukubukeka okuhle kakhulu.
Isiliva kwakuwumbala okhethwe 'ama-mermaids' asebusuku. Dakota Johnson ukwazile ukungena ngesigqoko esihle kakhulu ngeChanel Haute Couture yakhe ekhangayo embozwe ngama-paillettes. Futhi ongakusho ngokumangazayo uJulianne Moore, ngemodeli ye-Givenchy efakwe ama-plima ngezansi. Futhi ngesiliva, okulungile impela Reese isipuni, okwathi ngalesi sikhathi yayingenawo umklomelo kodwa yasizuza ngokubukeka kwayo: intambo embozwe ngama-paillettes avela kuCalvin Klein Collection.
Naomi Watts Wadelela inhlanhla, wazinika ithuba ngengubo ephuzi futhi wayinqoba inselelo. Okunye okuvelele ebusuku ukubonakala kwakhe kukhaphethi obomvu onemodeli yeGucci nomgexo wenyoka waseBulgaria. Ilunge ngokuphelele.
Izitayela zezinwele ze-'Golden Globes 2015 ', ngaphandle kokungabaza, i-'bob' ephelele ye Sienna Miller. Uma ungeza ingubo yothando yaseMi Miu kulokho, impumelelo iqinisekisiwe.
Michelle Monaghan Uyeke ukuthambekela okukhona kukhaphethi obomvu ngomklamo wesitayela kaJason Wu.
Enye yezinto ezimnandi kakhulu kukhaphethi obomvu kwaba yinhle Kate Hudson, emangalisa engutsheni emhlophe enqanyulwe nguDonatella Versace.
Futhi kumhlophe, umlingisi I-Rosamund Pike, omunye wabaphakanyisiwe ngendima yakhe ku-'Lost '(' Gone Girl '). Usanda kubeletha ezinyangeni ezimbili ezedlule, kepha ubefuna ukusikhombisa uhlangothi lwakhe oluthanda kakhulu ngale ngubo enzima kakhulu kaVera Wang.
Emma Stone Wayefuna ukuphuma esikhunjeni, abheje ngokuhlukile, futhi siwushayela ihlombe umzamo wakhe. Ngubani owathi ukuze ube ngomunye wabembethe kahle kwiGolden Globes kufanele ugqoke ingubo? I-redhead ikuthola ngamabhulukwe amnyama wesitayela se-tuxedo ngomnsalo omkhulu nomzimba we-jeweled ovela kuLanvin.
Ukubukeka okuhlukile ngobuntu, lokho kwe Keira Knightley, oqokwe ngendima yakhe 'KuMdlalo Wokulingisa'. Umlingisi usebenze njengenxusa leChanel ngomklamo wokuphrinta onothando.
Omunye obefuna ukugqama nokubheja ngokubukeka komuntu uqobo ngumlingisi Claire baseDenmark. I-protagonist yochungechunge 'Izwe' imangele ngomklamo ophrintiwe nguValentino.
Diane Kruger uhlala njalo ephakathi kwezingubo ezigqoke kakhulu ngokufaneleka kwakhe. Nakulokhu futhi, akazange ahluleke ngengubo engenaphutha yamaparele evela ku-Emilia Wickstead.
Jennifer Aniston, oqokwe kwiBest Actress, ubengomunye wabebelindelwe kakhulu kukhaphethi obomvu futhi ebengafuni ukudumaza umuntu. Ukuze enze lokhu, wathola u-'Angelina 'egqoke le ngubo ephelele emnyama yeSaint Laurent.
Isitayela sezinwele esiphelele, izimonyo ezingenakulinganiswa kanye nengubo e-hyper sexy, yamenza Jessica Chastain komunye wabaphikisi bakakhaphethi obomvu kanye 'ne-femme fatale' yasebusuku. Ukhethe ukuthambekela kwensimbi, kepha yena, ngethusi, ngomklamo we-Atelier Versace onentambo ye-vertigo.
Futhi umklomelo wobulili obuhle kakhulu uya kokumangazayo Jennifer Lopez, ophinda njalo amnikeze konke kwiGala leGolden Globes. Nakulokhu futhi, akazange adumazeke ngengubo yakhe emangalisayo yeZuhair Murad, okuwumbukwane okwenze kwaba nomuzwa ezinkundleni zokuxhumana futhi wamthwesa umqhele njengomzimba waseHollywood.
Amy AdamsEphelele kepha evinjelwe kakhulu, wakhetha ukugqoka kahle i-lavender Versace ukuze akhuphukele phezulu ayolanda umlingisi wakhe ohamba phambili kumqhudelwano wamahlaya noma wezomculo ngendima ayidlalile ku 'Big Eyes'.
Enye yezinto ezithandana kakhulu ebusuku: Anna Kendrick nengubo yakhe yenkosazana kaMonique L'huillier.
Kwakungubusuku lapho abaningi babekhetha ukubomvu, umbala okhethwe umuntu ongenacala U-Allison Williams, enengubo engenazintambo ka-Armani Privé.
UTaylor Schilling Wayengomunye wezindlovukazi zikakhaphethi obomvu ekwakhiweni okumangalisayo kukaRalph Lauren nge-crossover neckline.
Helen Mirren Wayefuna ukujoyina imiboniso yobumbano nokuhlaselwa kwaseFrance ngokungeza ibhroshi elimise okwepensela engutsheni yakhe yaseDolce & Gabbana.
Okumnandi kakhulu Heidi Klum, enengubo ye-neckline engalingani esayinwe nguGucci.
Catherine Zeta-Jones Ubeke inkanyezi kokunye okudume kakhulu kukhaphethi obomvu, futhi kulokhu wakhetha ingubo ebomvu ebomvu engakwazanga ukusibekela imibono ngoshintsho olusobala ebusweni.
Ngemuva kokuphikisana nomjaho kuma-Oscars ngonyaka owedlule, ULupita Nyong'0 bekungenye yezinto ebelindelwe kakhulu kukhaphethi obomvu. Waphinda futhi, wakhombisa ukuthi uchwepheshe ekusebenziseni imibala, kulokhu, ethandwa kakhulu yiGiambattista Valli.
Emily Blunt, ukubheja ngomkhuba wamaGrikhi, ngomklamo omhlophe kaMichael Kors.
Kate BeckinsaleWayengafuni ukuzibeka engcupheni futhi wakhetha ukuyidlala iphephile ngomklamo omuhle ka-Elie Saab onomzimba we-paillettes wesiliva.
I-Felicity Jones, ongomunye wabaphakanyiselwe i-'Theory of Everything ', ulungile kakhulu engutsheni yebhodlela eluhlaza Dior.
Imibhangqwana enhle kakhulu ebusuku. UGeorge Clooney no-Amal (kusuka kuChristian Dior), kukhaphethi wabo wokuqala obomvu njengomshado. UChanning Tatum noJenna Dewan, onengubo ephuzi yeCarolina Herrera. Y UBenedict Cumberbacht nengoduso yakhe, USophie umzingeli, ephelele ngengubo yezimbali evela ku-Erdem.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Ingubo » IGolden Globes 2015: ukubukeka okuhle kakhulu
Izicathulo zikaVictoria zineminyaka eyikhulu ubudala